एकल लीभर किचन मिक्सर ट्याप मैट कालो
रेटेड 5.005बाहिर आधारित3मूल्यांकन ग्राहक
SKU: 2310301B विभाग: भान्साको नल, किचनको नलहरू तान्नुहोस् टैग: भान्सा सिink्क नल, ठोस ब्रास, कुञ्जी टाउको
केवल शानदार! म्याट कालो मन पर्दछ यो हाम्रो काउन्टर शीर्षको साथ राम्रो देखिन्छ। स्थापना निर्देशनहरूमा र color्ग फोटोहरू थिए जुन यसलाई बुझ्न सजिलो भयो। मैले नल स्थापना गरेँ तर कहिले पनि मलाई कुनै समस्या भएन, कुनै लीक भएन! मेरो श्रीमान् धेरै आश्चर्यचकित हुनुभयो कि मैले यो कुनै सहयोग बिना गर्न सक्दछु।
पानी धेरै छिटो बाहिर आउँछ। फिर्ता लिन योग्य टाउको यति राम्रोसँग काम गर्दछ कि म विश्वास गर्न सक्दिन कि मैले अवस्थित नल बदल्नको निम्ति यति लामो कुर्नुभयो।
मूल्य आश्चर्यजनक थियो। तपाईं यस खरीदको साथ माफ गर्नुहुने छैन !!
म यो नलसँग कत्ति खुसी छु कि यो कती सस्तो थियो भनेर विचार गर्दै। स्थापना धेरै सजिलो थियो र नल स्थापनाको लागि सबै आवश्यक संग आयो। त्यहाँ स्प्रेयरको लागि एक राम्रो लम्बाई नली छ र तौल पर्याप्त स्थानमा यसलाई राख्छ। यो राम्रो हुनेछ यदि त्यहाँ स्प्रेयर र नल शरीरको बीचमा चुम्बक थियो तर यो स्थानमा रहिरहन्छ जब ध्यान फिर्ता लिँदा। म यो साथीलाई सिफारिस गर्दछु।
म माया गर्छु यस नललाई माया गर्छु! यो स्थापना गर्न एकदम सजिलो थियो, एकपटक about मिनेट जति मात्र मैले पुरानो नल हटाए। स्थापना गर्न सब भन्दा गाह्रो अंश अघिल्लो हटाउने हो। दिशा स्पष्ट थियो, मलाई मन पर्यो कि यसमा प्रत्येक चरणको चित्रण थियो। मेरो भान्साकोठा तुरून्त अपग्रेड भयो र म यो खरीदको साथ एकदमै खुसी छु! यो धेरै सस्तो थियो, गुणवत्ता देखिन्छ, मलाई म्याट फिनिश मन पर्छ। सावधान हुनुहोस्, फिंगरप्रिन्टहरू अधिक देखिने छन् तर सजिलै मेटाइन्छ। यो राम्रोसँग प्याकेज गरीएको थियो र अपेक्षा भन्दा पहिले आयो। यस उत्पादनको बारेमा भन्न नकारात्मक केहि छैन, मैले दुई अन्यलाई सिफारिस गरें र दुबैले यसलाई खरीद गरें।